Tag: famolavolana bilaogy | Martech Zone
Tag: famolavolana bilaogy
Computer Shopper dia manana lahatsoratra momba ny fanatsarana ny bilaoginao. Ilay lahatsoratra dia misy torohevitra vitsivitsy izay ilaina fa heveriko fa tsy azon'izy ireo tsara ny laharam-pahamehany ary tsy natombok'izy ireo avokoa ny zava-dehibe rehetra. Tsy nitsaha-nitombo ny fifamoivoizana tao amin'ny bilaogiko tato anatin'ny roa volana lasa izay. Norefesiko tsara ny mpamaky ahy, ny loharanon'ny mpamaky ahy, ary namboariko mifanaraka amin'izany. Nianatra iray taonina aho tao anatin'izay volana vitsivitsy lasa izay. Ity ny Tenako Top: Aza